Apple Pay na-akwadozi Tesco Bank na TSB na UK | Esi m mac
Apple Ṅaa emeriela taa ndị nkwado abụọ dị mkpa maka United Kingdom n'ụdị Bank Tesco y TSB. Ndị ahịa nwere ike ịgbakwunye kaadị na ọrụ ahụ site na ngwa ahụ 'Akpa ego ' na ngwaọrụ iOS gị, mana enwere ụfọdụ mgbochi.
Banyere Tesco kwuru na ị chọrọ kaadị akwụmụgwọ Tesco Bank nyere site MasterCard a ga-eji Apple Pay, kaadị ndị enyere visa anaghị akwado ya ugbu a. Okwesiri ighota na mgbe Tesco Bank na TSB na enye ugbua nkwado nye Apple Pay, obughi ulo ahia ha nile na UK nwere ndi achọrọ. NFC ọnụ inwe ike iji ha, mana a ga-etinye ya n'ọrụ na obere oge.
TSB edoghi oke ọ bụla na peeji ya maka nkwado Apple Pay, mana ọ na-enye ụfọdụ ọmarịcha nkwalite ndị ahịa ya. Ndị na-eji Apple Pay nwere 'Classic Plus' yana kaadị kredit ha tupu Disemba 2016, ga-enweta 5 percent na ego nkwụghachi nke ịkwụ ụgwọ ha mere maka mbụ £ 100, kwa ọnwa ruo na njedebe nke afọ.
Naanị nnukwu ụlọ akụ dị na UK iji nọgide na-akwadoghị na Apple Ṅaa Ọ bụ Barclays, nke ukwuu maka ndakpọ olileanya nke ndị ahịa ya. Companylọ ọrụ mbụ enweghị mmasị n'ịkwado ọrụ AppleMana mmeghachi azụ sitere na ụlọ akụ niile, na ndị ahịa ha, nwere ike ime ka Barclays kwenye ịgbanwe obi ya. O sina dị, Barclays enyebeghị anyị ụbọchị mwepụta., nke a na-atụghị anya ịmalite na mmalite 2016.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple Pay na-akwadozi Tesco Bank na TSB na UK
"Apple emeela nke ọma ịkụ nzọ na ihe ndị Ọrụ amasịghị"